Vaovao - INONA INDRINDRA NY TOWERA MICROFIBER?
INONA INDRINDRA NY TOERANA MICROFIBER?
Ny lamba famaohana microfiber dia manova ny fomba fanadiovanao ny tranonao sy ny fiaranao. Ny kofehin-drakotra manify dia manolotra tombony maro na inona na inona fampiasanao ny lamba famaohana. Ireo lamba famaohana microfiber mihinana haingana sy maina ireo no hamita ny asa! Order ny lamba famaohana microfiber ambongadiny anio.
Inona avy ireo lamba famaohana microfiber?
Inona marina ny microfiber? Raha mijery lamba microfiber ianao dia mety hieritreritra fa mitovy sy mahatsiaro ho toy ny lamba famaohana landihazo ny fijeriny. Na izany aza, misy fahasamihafana sasany. Ny anarana dia manome fambara momba ny mampiavaka ny fitaovana. Manify dia manify ireo fibre mandrafitra ilay fitaovana. Ny microfiber dia miovaova amin'ny hatevin'ny kofehy mifototra amin'ny famokarana azy, fa mety eo ho eo anelanelan'ny 10 sy 50 heny noho ny volon'ny zanak'olombelona. Ny microfiber dia mety manana kofehy 200,000 manarona isaky ny santimetatra toradroa.
Ny fibre manify io dia manomboka amin'ny fifangaroan'ny polyester sy polyamide, izay anarana hafa amin'ny nylon. Polyester dia fitaovana matanjaka sy mateza manampy ny microfiber hihazona tsara. Ny ampahany polyamide amin'ny lamba dia manampy amin'ny kalitaon'ny absorbency ary mahatonga ny lamba famaohana maina haingana. Ny refy marina amin'ireo fitaovana roa ireo dia afaka miovaova isaky ny mpanamboatra, fa ny ankamaroan'ny lamba microfiber dia samy mampiasa azy roa. Rehefa vita ny tenona, dia mizara roa ireo kofehy mba hahatonga azy ireo ho tena tsara. Raha mijery ny fibra eo ambanin'ny mikraoskaopy ianao dia ho hitanao fa mitovy amin'ny kintana izy ireo. Mbola tsara lavitra noho ny landy aza izy ireo, ary manify kokoa noho ny landy ny kofehy.
Ny hatevin'ny kofehy dia tsy mitovy amin'ny mpanamboatra azy. Ny fibre izay mandrefy 1.0 denier na kely dia heverina ho microfiber, fa ny sasany amin'ireo fitaovana microfiber tsara indrindra dia manana refy 0.13 denier. Ny mpanamboatra sasany koa dia mamokatra vokatra samy hafa misy refy samihafa mba hikarakarana asa samy hafa.
Satria manify dia manify tokoa ny fibre, dia betsaka kokoa noho izany ny hitanao amin'ny landihazo sy ny lamba famaohana hafa. Ny fitomboan'ny isan'ny kofehy dia manome faritra amboniny kokoa amin'ny lamba microfiber, izay mampitombo ny fahombiazany amin'ny fanadiovana.
Tombony azo avy amin'ny lamba famaohana microfiber
Ny ankamaroan'ny olona dia mahita fa ny lamba famaohana microfiber dia madio sy maina tsara noho ny fitaovana hafa, indrindra fa ny lamba famaohana taratasy. Raha potehintsika ireo singa manokana ananan'ireny lamba famaohana ireny, dia azontsika fantarina ny antony itiavan'ny olona azy ireo matetika amin'ny fanadiovana.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana lamba famaohana microfiber dia misy:
o Absorbency: Ny firafitry ny microfiber dia mahatonga ny lamba famaohana tena porous, izay mahatonga azy ireo mandray be. Ny fibre dia afaka mifoka hatramin'ny impito ka hatramin'ny valo heny ny lanjany. Azonao atao ny mamafa ny rotra na ny maina amin'ny faritra diovinao haingana be.
o Fanamainana haingana: Fomba iray hafa amin'ny famolavolana porous dia ny lamba famaohana microfiber dia maina vetivety. Raha mampiasa matetika ny lamba famaohana amin'ny asa fanadiovana isan-karazany ianao, izany fotoana fanamainana haingana izany dia tombony azo antoka amin'ny fotoana ilanao azy. Rehefa tototry ny lamba famaohana dia vovozo tsara ny rano, ary somary maina avy hatrany.
o Malefaka: Ny lamba famaohana microfiber dia malefaka raha mikasika azy. Ity fahalemem-panahy ity dia mahatonga azy ireo mahazo aina hampiasana sy azo antoka amin'ny sehatra samihafa.
o Alternative eco-friendly: Raha mampiasa lamba famaohana taratasy na vokatra fanadiovana fanary hafa ianao dia mamokatra fako be dia be ianao. Rehefa mampiasa lamba microfiber ianao dia azonao ampiasaina indray isaky ny manadio ianao. Mora ihany koa ny manadio azy ireo, amin'izay izy ireo afaka mahazo fampiasana betsaka.
o Fanadiovana ny loto sy ny bakteria: Ny fibre tsara amin'ny microfiber dia manome faritra amboniny kokoa, noho izany ny loto sy ny bakteria aza mifikitra mora foana amin'ny fibre. Ny Microfiber dia toa misy fiatraikany manintona izay maka ny loto ka mampiraikitra azy, ka tsy atositosikao ambonin'ny tany fotsiny ianao. Azonao atao ny manadio ny habaka isan-karazany amin'ny fiezahana kely noho ny karazana fitaovana fanadiovana hafa.
o Fiampangana mijanona: Miaraka amin'ny tendrony maro amin'ny microfiber misaraka, ny lamba dia mamorona voajanahary fiampangana azy ireo miaraka. Manampy amin'ny fakana loto sy fako hafa io fiampangana tsy mijanona io, ary mijanona eo ny loto mandra-panasana ny lamba.
o Fanadio mihena: Satria mandaitra tokoa ny microfiber amin'ny fakana loto, matetika dia azonao atao ny mamafa ny faritra tsy mampiasa mpanadio na savony. Midika izany tombony izany fa afaka miala amin'ny zavatra simika vitsy ianao ao an-tranonao.
o Fanadiovana toerana kely: Ny kofehy tsara ao anaty microfiber dia afaka manampy anao hanadio amin'ny toerana kely. Ireo kofehy kely dia tonga any amin'ny triatra sy triatra izay mety tsy ho hitan'ireo fitaovana fanadiovana hafa. Ny endrika kintana amin'ireo kofehy dia manampy azy ireo hahatratra tsara kokoa an'ireo faritra kely ireo.
o Longevity: Ny lamba microfiber dia mety maharitra amin'ny fanasana miverimberina. Matetika izy ireo dia maharitra hatramin'ny diany 1.000 amin'ny alàlan'ny milina fanasan-damba. Amin'ny faharetana lava toy izany, azonao ny volanao amin'ireo fitaovana fanadiovana mahomby ireo.
Mampiasa lamba famaohana microfiber hanasana ny fiaranao
Ankoatry ny maha-ilaina azy amin'ny fanadiovana manodidina ny trano na ny birao dia malaza be amin'ny fanadiovana fiara ny lamba famaohana microfiber. Ny absorbency dia iray amin'ireo zavatra lehibe mahatonga ny microfiber manintona rehefa manome antsipiriany momba ny fiara. Ny lamba famaohana microfiber anao dia afaka mamafa ny rano avy ao anaty fiara aorian'ny fanasana azy mba hisorohana ny tasy. Azonao atao koa ny mampiasa lamba famaohana microfiber ho an'ny dingana fanadiovana tena izy eo amin'ny toeran'ny spaonjy na lamba hafa.
Atombohy amin'ny fanaovana siny misy rano mafana sy savony. Atsofohy ao anaty rano savony ny lamba famaohana microfiber anao. Manomboka eo an-tampon'ny fiara dia sasao amin'ny lamba microfiber ny faritra tsirairay. Ny fiasa amin'ny fizarana iray isaky ny mandeha dia manome antoka anao hanarona ny habakabaka rehetra, noho izany dia toa mamiratra sy vaovao ny fiara iray manontolo.
Rehefa mamafa ny fiara ianao dia tazomy ho ambonin'ilay lamba famaohana microfiber ny tananao. Manome anao fifandraisana bebe kokoa amin'ny etona ity, amin'izay ianao afaka manadio tsara kokoa. Mihetsika amin'ny fihetsiketsehana boribory. Tokony ho tsikaritrareo fa ny lamba famaohana microfiber dia maka ny loto ary manala azy amin'ny fiara fa tsy mamindra azy amin'ny faritra iray amin'ny fiara mankany amin'ny faritra hafa.
Atsofohy ao anaty rano savony matetika ny lamba famaohana microfiber anao. Manampy amin'ny fanesorana ny loto sasany amin'ny fandriky ny lamba famaohana io rehefa manadio ny fiara ianao. Sasao ao anaty rano ilay lamba mba hanalefaka ny loto. Makà servieta vaovao raha maloto be ny fiaranao, ary tsy mahomby intsony ilay lamba.
Vantany vao madio tanteraka ny fiaranao dia sasao tsara amin'ny alàlan'ny rano madio avy amin'ny fantsona na siny. Manohiza manasa mandra-pahazoanao antoka fa tsy misy savony intsony amin'ny fiara. Sasao tanteraka ny savony no lakilen'ny fisorohana ny fahatapahana miserana. Ny tsara indrindra dia ny manomboka eo an-tampony ary miala eo ambany, ka tsy miverina amin'ny faritra ilay savony aorian'ny fanasana azy.
Manamaina ny fiaranao amin'ny lamba microfiber
Dingana lehibe iray hafa hisorohana ny teboka sy ny tadiny ny fanamainana ny fiaranao amin'ny tananao fa tsy ny hamelomany azy. Eo no ilana servieta microfiber vaovao. Ny fakana lamba famaohana vaovao sy madio dia manakana ny savony sisa tsy hiverina amin'ny fiara ary hiteraka tsipika.
Apetraho amin'ny tànanao fisaka ilay lamba famaohana. Manomboka eo an-tampon'ny fiara, ataovy maina ny faritra tsirairay amin'ny lamba famaohana misokatra sy fisaka mba hampitomboana ny fifandraisana amin'ny tany sy hanafainganana ny fanamainana.
Amin'ny farany, ny lamba famaohana microfiber anao dia mety ho manomboka tototry. Izy io dia afaka mitazona hatramin'ny 7 na 8 heny ny lanjany amin'ny rano, saingy mahatratra ny faratampony amin'ny fotoana iray izy io. Atsaharo indraindray ny manangona rano betsaka araka izay azo atao. Noho ny endriny tsy manam-paharoa, ny microfiber dia ho maina tampoka ary mbola tena mandray.
Raha manomboka maloto ny lamba famaohana amin'ireo potipoti-javatra sisa tavela dia omeo kobanina haingana amin'ny rano madio sy madio vitsivitsy. Esory ny fihoaram-pefy, ary tohizo ny fanamainana ny fiara. Mety mila mandeha mamaky ny fiara fanindroany ianao mba hanesorana ireo hamandoana sisa tavela eo ambonin'ny fiaran'ny fiara.
Fampiasana lamba famaohana microfiber hafa
Ny antsipiriany amin'ny fiara dia ampiasaina amin'ny lamba famaohana microfiber, saingy misy fomba maro hampiasana ireo lamba mora ampiasaina ireo manodidina ny tranonao na ny biraonao. Miasa amin'ny ankamaroan'ny tanjona fanadiovana izy ireo amin'ny toerana rehetra.
Ny fampiasana hafa ho an'ny lamba famaohana microfiber dia misy:
o Fandroana fanamainana: Ny fitrohana avo lenta azy dia mahatonga ny microfiber ho fitaovana tsara hitazomana ny raraka. Tehirizo ao anaty lakozia, faritra iasana ary toerana hafa mety hisy raraka ny lamba famaohana. Azonao atao ny mandray haingana ilay ranoka alohan'ny hiparitahany na anaovany korontana lehibe kokoa.
o Toerana vovoka maina: Satria voageja miiba ny microfiber dia asa be ny misintona vovoka amin'ny sary, talantalana ary sehatra hafa ao an-tranonao. Mamandrika io vovoka io izy fa tsy hanosika azy fotsiny na hianjera amin'ny sehatra hafa. Raha manana lamba microfiber ianao, dia tsy mila mpanadio vovoka intsony ianao.
o Famafana ny takelaka ao an-dakozia: Ny fahombiazan'ny microfiber dia mahatonga azy io ho fomba mety hanadio ny countertops anao. Azonao atao ny mamafa ny korontana maro nefa tsy lena ny lamba famaohana. Raha manana korontana mafy loha ianao, dia atsaharo kely ny microfiber mba hadio. Satria mamandrika bakteria sasany ihany koa ny microfiber, ny fampiasana azy io hanadiovana ny lakoziananao dia afaka manampy amin'ny famongorana mikraoba hitazona ny fahadiovan'ny countertop.
o Manadio ny toerana fandroana rehetra: Toerana iray hafa izay mandray soa amin'ny fanadiovana tsara dia ny trano fidiovana. Ataovy eo am-pelatanana ny lamba famaohana microfiber izay tsy ampiasaina afa-tsy amin'ny fanadiovana ny toerana fandroana. Izy ireo koa dia tsara hanamafana rano an-dabozia aorian'ny ranonorana satria mitroka be.
o Famafana ny faritra nokasihina matetika: Ny kitapom-baravarana, ny jiro sy ny faritra hafa dia mahazo fikitihana betsaka isan'andro. Izany dia manampy hatrany amin'ny loto, mikraoba ary potipoti-javatra hafa. Diovy tsy tapaka amin'ny lamba famaohana microfiber izy ireo mba hampihena ny famafazana ireo loto ireo.
o Manadio varavarankely tsy misy tadiny: Ny toetran'ny microfiber mora mandray haingana dia mety indrindra amin'ny fanadiovana ny fitaratra tsy misy tadiny. Azonao atao ny manadio madio ny windows tsy misy mpanadio.
o Famafana fitaovana: Esory amin'ny microfiber ny loto, vovoka ary potipoti-javatra hafa.
o Fanasana fanadiovana: Raha tsy mampaninona anao ny midina amin'ny tananao sy ny lohalinao, dia azonao atao ny mamafa ny gorodonao amin'ny lamba famaohana microfiber. Atsofohy kely ny lamba famaohana mba hanampiana amin'ny fanesorana marika maloto.
o Izay asa fanadiovana rehetra raha matetika ianao no mampiasa lamba famaohana taratasy na lamba hafa: Microfiber dia mety amin'ny asa fanadiovana rehetra any an-tranonao na any amin'ny birao.
Soso-kevitra amin'ny fampiasana lamba famaohana microfiber
Azonao atao ny mampiasa lamba famaohana microfiber amin'ny asa fanadiovana rehetra, saingy mila fikarakarana kely izy ireo. Rehefa mikarakara ny lamba famaohana microfiber anao ianao dia mihazona tsara kokoa ary maharitra ela kokoa, ka ampitomboinao ny fampiasam-bolanao.
Ampiasao ireto torohevitra ireto mba hampiasaina tsara ny lamba famaohana microfiber anao:
o Sasao tsy tapaka izy ireo: Ny fanasana tsy tapaka dia mitazona ny lamba famaohana microfiber anao ho vaovao sy vonona amin'ny asa fanadiovana manaraka.
o Ahenao ny hamandoana: Raha mandena ilay lamba famaohana ianao mba hamafana ny loto, dia ampiasao rano kely fotsiny. Satria porofona be ilay microfiber dia tsy mila rano be dia be hanaovana fitaovana fanadiovana mandaitra. Ny fanamasinana ny lamba famaohana dia mety hahatonga azy tsy hahomby firy ary hiteraka fanosihosehana lamba famaohana fa tsy haka azy io.
o Kaody loko: Raha mampiasa servieta microfiber ianao amin'ny asa samy hafa, mividiana loko maro isan-karazany mba hisorohana ny fandotoana. Mampiasà lamba famaohana microfiber iray ho an'ny fiara, loko iray ho an'ny trano fidiovana ary iray hafa ho an'ny lakozia. Azonao atao ny milaza mora foana izay alehan'ny lamba famaohana tsirairay mba hisorohana ny mikraoba na bakteria amin'ny faritra samihafa ao an-trano.
o Halaviro ny zavatra simika mahery: Na dia mahatohitra fampiasana azy amin'ny akora simika maro aza ny microfiber dia tsara kokoa ny misoroka izay zavatra masiaka, toy ny akora simika misy asidra. Microfiber dia vita amin'ny plastika amin'ny ankapobeny, koa aza mampiasa zavatra mety hanimba plastika. Ny lamba microfiber dia mandaitra tokoa amin'ny fanadiovana loto nefa tsy misy mpanadio, ka mety tsy mila zavatra mihitsy ianao.
Mikarakara ny lamba famaohana mikrofiber anao
Ny fanadiovana tsy tapaka ny servisinao microfiber dia ilaina amin'ny fitazonana azy ireo. Mahomby izy ireo amin'ny fakana loto sy mikraoba, noho izany dia tianao ny manasa azy ireo matetika mba hialanao amin'ireo loto ireo. Ny fanadiovana lamba dia mitazona ny lamba famaohana mijery tsara kokoa rehefa manadio azy ireo kokoa.
Rehefa manasa lamba famaohana microfiber ianao dia sasao irery. Ny lint avy amin'ny akanjo hafa sy karazana lamba famaohana samy hafa dia afaka mifikitra amin'ny microfiber raha miaraka manasa azy ianao. Na ny sombin-landihazo kely vita amin'ny landihazo aza dia mety tafiditra ao anaty kofehin'ny lamba famaohana ary mahatonga azy ireo tsy hahomby.
Ampiasao ireto torolàlana momba ny fanasana ireto:
o Sasao amin'ny rano mafana ny lamba famaohana microfiber. Sorohy ny rano mafana.
o Mampiasà detergine ranon-javatra malefaka kely fa tsy detergine vovoka.
o Sorohy ny fanalefahana lamba sy ny paoka. Samy afaka mampihena ny fahombiazan'ny lamba famaohana ary mampihena ny androm-piainany.
o Ataovy maina amin'ny servieta hafanana ambany ny lamba famaohana microfiber tsy misy ravina fanamainana. Ny sombin-kazo kely avy amin'ny ravina fanamainana dia mety tafiditra ao anaty kofehin-damba, izay mety tsy hahomby. Ny karazana lamba fanamainana lamba, ao anatin'izany ny ravina fanamainana, dia mety hisy fiatraikany amin'ny fiampangana voajanahary ny lamba, izay mampihena ny fahombiazany amin'ny fakana loto.
o Matetika ny lamba famaohana microfiber dia minitra vitsy monja vao maina. Hamarino matetika ny maina ny lamba famaohana mba tsy hitehirizana azy ireo ao amin'ilay fanamainana mandritra ny fotoana lava toy izay ilaina.
Lamba famaohana vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy, Pyjamas amin'ny haran-dranomasina, Sariitatra lamba famaohana amoron-dranomasina, Lamba famaohana vita pirinty Disney, Tape Beach Bag, Andinina amoron-dranomasina vita amin'ny Pure Microfiber,